समाचार Archives - Page 1312 of 1327 - Dainik Online Dainik Online
बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट भक्तपुर भ्रमण
शिक्षामन्त्रीले आग्रह गरेको भोलिपल्टै अनशन तोडे गोविन्द केसीले
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशन तोड्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै उनले जुस खाएका छन । मन्त्रालयमा हिंजो सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले मुलुक अहिले कालापानीको बहसमा
गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भैसके, ममाथि अन्याय भयो : दुर्गा प्रसाई
काठमाडौं । बि.एण्ड.सि मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले अनशनरत डा गोविन्द केसीले अघि सारेका अहिलेका मागहरु कुनैपनि जायज नभएको जिकिर गरेका छन् । यसअघि केसीले अघि सारेका सबै माग पूरा
महिलामाथि कुटपिट गर्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
धनगढी । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष छविलाल हौजाली पक्राउ परेका छन् । कार्यालय सहयोगी तुलसरा सिजालीलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष हौजाली पक्राउ परेका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय
काठमाडाैं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेकाे छ । शिल्पाले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएसँगै
काठमाडौं सहित देशभर चिसो बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको हो । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम १० दशमलव छ डिग्री
थैलेसिमियाको उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह
काठमाडौं । थैलेसिमिया रोगका पीडितहरुले यस रोगको उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन । थैलेसिमिया रोगका पीडितहरुले यस रोगको उपचार सबै अस्पतालमा हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण
मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई लाग्यो गुरुनानक जन्मजयन्ती
काठमाडौं । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई श्री गुरुनानक जन्मजयन्ती लागेको छ । उनले श्री गुरुनानक जन्मजयन्तीको अवसरमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शिख धर्मावलम्बीहरुमा
प्रत्यक्षदर्शीलाई आलम समूहले अपहरण गरी बयान फेर्न लगाएकाे खुलासा
काठमाडौं । रौतहटमा १२ वर्ष अगाडि भएको बम विष्फोटका प्रत्यक्षदर्शी गौरीशंकर चमारलले आफूलाई आलम समुहले अपहरण गरि बयान फेर्न लगाएको बताएका छन् । आलमका व्यक्तिहरुले आफू घरमै बसिरहेको बेला केही
रोग पहिचान नगरी शल्यक्रिया गर्दा लक्ष्मी रसालीको मृत्यु
पाल्पा । रोग पहिचान नगरी शल्यक्रिया गर्दा गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका–८ की १७ वर्षीया लक्ष्मी रसालीको मृत्यु भएको छ । पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा ‘एपेन्डिक्स’को उपचारका क्रममा शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको रक्त